8 xilli ciyaareedka "Game of Thrones" waxaa lagu daawadey Rikoor 17,4 Milyan - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo »8 xilli ciyaareedka" Game of Thrones "waxaa lagu daawaday Rikoor 17,4 Milyan - BGR
8 xilli ciyaareedka "Game of Thrones" waxaa lagu daawaday Rikoor 17,4 dadka - BGR
HBO ayaa sii daayay tirakoobyadii dhagaystayaasha ahaa ee ugu horreysay Game of Thrones 8 xilli, taas oo, sida laga soo xigtay shabakadda, ayaa soo jiitay rikoor 17,4 million daawadayaasha habeenkii Axada - garaaceen labada 16,1 million daawadayaasha kuwaas oo lagu qabtay xilli ciyaareedkii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka 7 iyo 16,9 million ay daawanayeen kuwaas oo ka qeyb galay final xilli ciyaareedkii hore.
Isbeddelka gudaha Taxanaha HBO ee cajiibka ah waa kuwa daawadayaasha ah oo u socda jihada hal mar xilli kale. midka xiga ee kor ku xusan - waxayna u egtahay in isbedelkan la xaqiijin doono iyadoo taxanaha loo diyaarinayo inuu wax ka qabto xaaladdiisa ka dib shan dhacdo oo kale.
Tilmaamida xoogga taageerayaasha caansan ee taxanaha taxanaha Sida laga soo xigtay HBO, dhagaystayaasha habeenkii Axadda waxay tiriyeen 11,8 milyan daawadayaasha daawashada telefishanka. Ku dhawaad ​​50% ka mid ah dadka dhagaystayaasha ah ayaa markaa u adeegsaday HBO Hadda. Si aad u ogaato tirada daawadayaasha taxanaha taxanaha xilli kasta, muuqaalka guud ee tirooyinka rasmiga ah ee HBO (via Dharka ) ayaa muujinaya waxyaalahan soo socda.
Xisaabinta HBO Go iyo HBO Hadda oo ah qof soo-dhaweyn ah oo ku kordhaya maalmaha 30 ka dib xilli kasta marxalad kasta, tani waxay ahayd daawadayaasha Mareykanka ee xilli-ciyaareed kasta:
1 Xilliga: 9,3 Million
2 Xilliga: 11,6 Million
3 Xilliga: 14,4 Million
4 Xilliga: 19,1 Million
5 Xilliga: 20,2 Million
6 Xilliga: 25,7 Million
7 Xilliga: 32,8 Million
Taxanaha khiyaaliga ah ee ku saabsan waddanka qiyamka ee Westeros iyo boqortooyooyinka dagaalku sidoo kale waxay u muuqdaan in ay sii kordhayaan. boodhadhka qaata dhamaan doomaha HBO. Sida laga soo xigtay warbixin la daabacay Isniintii ee wargeyska Hollywood soo noqoshada Game of Thrones sidoo kale caawiyey Barry jacaylka mugdiga ah ee ku saabsan dilaa taxane ah, ayaa ku dhuftay taxane rikoodh ah oo ka tirsan 2,2 million daawadayaasha. Sidoo kale, Weep et Todobaadkii hore, caawa labaduba waxay gaadheen tiro badan oo daawadayaal ah - 1,5 iyo 1,7 million, siday u kala horreeyaan - in aysan gaarin muddo ka badan sannad.
Marka ugu horreysa ee GoT Dhanka kale, tirooyinka dhagaystayaasha ee cajiibka ah ayaa ah mid aad u soo jiidasho badan, iyadoo fikradayada, dhacdooyinka hordhaca ah ee xilli-ciyaareedkii ugu dambeeyay ee taxanaha ah ee taxanuhu ay lahaayeen waxoogaa soo-dhowaansho iyo ficil ka yar waan jeclaan lahaa inaan aragno . Waxaan rajeyneynaa in arrintan si dhaqso ah loo saxi doono marka ay adag tahay inay bilaabaan inay si kedis ah uga soo kabtaan 2.
Waxaa la xaqiijiyay in natiijada imaanshaheedu uu ahaa kii ugu dambeeyey - BGR